pamusoro 5 Cities With The Best Nightlife In Europe | Save A Train
musha > Travel Europe > pamusoro 5 Cities With The Best Nightlife In Europe
Kuenda kutoona iri sarudzo huru - asi chii kana iwe chete uchida unakirwe? Kana zvakadaro, pane maguta nezvakanakisisa Nightlife, uye kuwana ikoko nechitima zviri nyore uye chipa.
Bato mhuka, hapana akafanana kuona ari Nightlife rimwe guta idzva. Chinhu chakanakisa pamusoro kuzviita Europe ndechokuti muguta rimwe nerimwe rine yakasiyana vibe. Tora Kutarira pamusoro 5 maguta nezvakanakisisa Nightlife uye ona nderipi unonakidzwa kupfuura:
1. Berlin raMwari Nightlife, Jerimani
Uchawana Berlin muTop 5 Cities nezvakanakisisa Nightlife nokuda kwechikonzero. Guta rine vakagwinya uye zvikuru Clubbing Chiitiko chiri risingaenzaniswi muEurope. Berlin inokwezva yakawanda yemafungiro akafanana mhuka dzemubato. Ndicho chikonzero kwava vimbiso kuva nguva yakanaka imwe yayo vakawanda zvikwata. Berghain ndeyechokwadi guta rakakurumbira rehusiku, pamwe neakasarudzika uye vamwe, vangati zvakanakisa muEurope. Kana simba chirimwa, zvino ndicho kwacho kweBerlin kuti Clubbing Chiitiko. Haugoni Miss kushanyira nayo kana uri kutsvaga imwe nguva huru! sezvinei, richisvika Berlin nechitima zviri nyore - unogona kuwana ikoko kubva Amsterdam, London, uye Frankfurt, nezvimwe maguta.
2. Amsterdam raMwari Nightlife, ari Netharenzi
Amsterdam nderimwe remaguta kuti vanokodzera mukurumbira wayo somumwe yakanakisisa kuungana. Chinhu dzakakurumbira rwendo, kunyanya vanoda nomweya, Techno, hip, imba zvakadzama, uye EDM. Vamwe anokosha nzvimbo kuzoshanyira ndivo Warehouse Elementenstraat uye Sugar Factory. Vose vari makuru zvikwata kuungana pa, zvichienderana chii uchifarira. Chimwe chinhu ndechokuti chokwadi - mapato Zvikara. The makirabhu regai kuvhara kusvikira 3 kana 4 a.m., saka pane nguva yakawanda vanakidzwe. Svika Amsterdam nechitima kubva chero zvikuru maguta European kufanana Berlin, Paris, London, uye kweBrussels.
3. Stockholm, Siwidheni
Muchando dzekuma Scandinavia, vose veko uye vashanyi Munoziva kuungana. Stockholm riri pakati pamaguta nezvakanakisisa Nightlife nokuda dzakasiyana-siyana makirabhu uye mapoka makuru mavari. Gehena kwakaita Kitchen inzvimbo haugoni kurasikirwa mu Stockholm, saka iva nechokwadi kuti kutarisa kuti kunze. Guta iri nyore asvika nechitima kubva nevamwe European njanji hubs.
4. Rome, Itari
risingakanganwiki chadenga yeRoma nemamwe runogonesa kunaka Clubbing muguta. Quintessentially Italian, zvakaitika Clubbing mu Rome ane mumwe upenyu-rudo, akangoverengawo noukomba nayo. Big kutamba uriri, ushamwari bartenders, uye kunonakidza mhepo kuti muRoma Nightlife rakasiyana ruzivo. Chimwe chezvikamu zvakanaka nezvekushanyira Italy ndechokuti pane zvakawanda chitima Vatasvi. Vanogona kuwana iwe chero uchida kuenda. Vamwe vavo vachakubata iwe kune dzinoyevedza zvinotyisa munzira.
London ane zvakasiyana Clubbing Chiitiko kuti oriisa pakati pamusoro pemaguta mashanu nezvakanakisisa Nightlife mu Europe. Unogona kushanyira fadza tiende kumanaitikirabhu, burlesque zvinoratidzwa, Retro makirabhu, uye chinhu pakati. Ndiyo nzvimbo huru kuti bato, uye kusvika London ne chitima hunowanikwa kubva kumaguta akawanda makuru European. Regai kurasikirwa London Clubbing ruzivo!
Agadzirira yako inotevera rwendo bato-kutsvaka? Our Top 5 Cities pamwe Best Nightlife mu Europe haangauyi mwoyo iwe, kunyange kana iwe ambovashanyira pamberi. Bhuku rako chitima matikiti uye kunakidzwa kunonakidza uye mumhanzi!
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova, kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftop-cities-best-nightlife%2F%3Flang%3Dsn- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
#tsvimbo London Nightlife pati chitima mazano travelamsterdam travelengland travelgermany travelnetherlands